မင်းရဲ့အီးမေးလ်ကိုဖွင့်ပြီးမဖတ်သေးတဲ့အီးမေးတစ်ထောင်ကျော်ကိုသင့်ရဲ့စာပုံးထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ အဲဒီထဲက ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုသင်မစိတ်ဝင်စားဘူးလား။ များသောအားဖြင့်၊ သင့်အားဤနေရာနှင့်ထိုနေရာတွင်အီးမေးလ်တစ်စောင်ဖျက်ရန်အချက်ပြပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်စိတ်ဝင်စားသောအီးမေးလ်ကိုမဖျက်ရန်သေချာစေရန်သင်စိတ်အားထက်သန်နေရန်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ နောက်တစ်ပတ်တွင်ထပ်မံပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်သတိပြုမိသောအခါ၎င်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။
သင်အကောင့်တစ်ခုလုံးကိုရပ်တန့်လိုသည့်အချက်အထိသင်၏ inbox ထဲသို့မလိုလားအပ်သောအကြောင်းအရာများပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်အတူ၊ အီးမေးလ်ပြproblemနာမည်သို့တိုးလာသည်ကိုညွှန်ပြသည်။ သို့သော်၊ အီးမေးလ်ကို Facebook၊ eBay, PayPal စသည်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အီးမေးလ်ကိုပယ်ဖျက်ခြင်းသည်ထူးခြားသောအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
Semalt Customer Customer Success Manager ရော့စ်ဘာဘာကအောက်ဖော်ပြပါနည်းဗျူဟာလေးခုကသူ့အား spammers များထံမှသူ၏အကောင့်ကိုပြန်လည်ရယူရန်မည်သို့ကူညီခဲ့သည်ကိုပြောပြသည် -
၁။ သင်မလိုချင်တဲ့အီးမေးလ်များကိုမကြာခဏပို့ပေးသည့်အရင်းအမြစ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ အီးမေးလ်များကိုပယ်ဖျက်ရန်ပါသောပျင်းရိဖွယ်ချဉ်းကပ်မှုကိုမသုံးပါနှင့်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဖွင့်ပြီးစာရင်းသွင်းထားခြင်းကိုဖျက်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပြီးနောက်သင့်အီးမေးလ်ရှိပေးပို့သူ၏လိပ်စာကိုရှာပါ။ နောက်ပိုင်းတွင်သင်၏ရလဒ်စာရင်းမှပေါ်လာသောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖျက်ရန်လုံခြုံသည်ဟုယူဆသည်။ သင်စာရင်းမသွင်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းရင်းမြစ်များမှအီးမေးလ်များကိုသင်လက်ခံရရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။
2. ဥပဒေအရစီးပွားဖြစ်အီးမေးလ်များအားလုံးသည်စာရင်းမဖျက်ရန်ရွေးစရာရှိသင့်သည်။ လိုအပ်ချက်ရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်မလိုချင်သောအီးမေးလ်အများစုသည်ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့) စာရင်းသွင်းခြင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်းကင်းမဲ့ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ရွေးချယ်ခြင်းမပြုရန်အရင်းအမြစ်မှအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိကြောင်းသင်သိသောအခါအောက်ပါအီးမေးလ်ပို့ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ ဤအီးမေးလ်ကိုစာရင်းမှပယ်ဖျက်ပါ (ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အီးမေးလိပ်စာကိုထည့်ပါ) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အခြားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ တုံ့ပြန်မှုကို "Done!" ပုံစံဖြင့်မျှော်လင့်ထားသင့်သည်။ သင်မလိုချင်တဲ့အီးမေးလ်များကိုအောင်မြင်စွာဖြေရှင်းပြီးကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။
၃။ ဖိုလ်ဒါများကိုဖန်တီးခြင်းသည်သင်၏အီးမေးလ်များကိုရှေ့သို့ရွေ့လျားစွာချောမွေ့စွာသွားလာစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အီးမေးလ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်အကောင်းဆုံးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သင့်အားဝင်လာသောအီးမေးလ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်နှင့်အ ၀ င်စာပုံးကိုသန့်ရှင်းစွာထားရှိရန်ကူညီပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်အတွင်းဖိုလ်ဒါ (၇) ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးသူတို့၏အဓိကအခန်းကဏ္ depending ပေါ် မူတည်၍ နာမည်အမျိုးမျိုးပေးခဲ့သည်။ ငါအီးမေးလ်တစ်စောင်သိမ်းဆည်းလိုပါက၎င်းဖိုင်တွဲများထဲမှတစ်ခုလုံးသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ ငါ၏အ inbox ကိုခပ်သိမ်းသောကာလသန့်ရှင်းခြင်းနှင့်လတ်ဆတ်သောသေချာစေရန်ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
4. သင်၏အီးမေးလ်ကိုပြုပြင်ပြီးတာနဲ့သင်က၎င်းကိုယခင်အနေအထားသို့ပြန်ရောက်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်မလိုလားအပ်သောအီးမေးလ်တစ်စောင်နှင့်ချက်ချင်းပေါ်လာရန်သေချာစေခြင်းဖြင့်သင်၏စာပုံးကိုထိထိရောက်ရောက်စီမံပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာကိုအချိန်ဆွဲနေပါကသင်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး စီခွဲထုတ်ရန်ထောင်နှင့်ချီသောအီးမေးလ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မလိုလားအပ်သောအီးမေးလ်များပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးသည်နှင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အနေဖြင့်အခြေအနေကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။